Mikraoba mikraoba miaraka amin'ny karaoty | Recipe ao an-dakozia
Maria vazquez | 29/05/2021 10:00 | Starters mangatsiaka
Tadidinao ve ny karaoty mikraoba Inona no nampianarinay anao hiomanana tato ho ato? Androany dia hampiasa azy io indray isika hanomanana a fanombohana maivana sy mamelombelona: Voan-ketraka misy karaoty. Lovia tsotra iray izay hanomezanay ireo karaoty mahazatra mahazatra.
Ny salady dia tonga fanombohana tonga lafatra amin'ity vanim-potoana ity. Rehefa miakatra ny hafanana dia tsy misy zavatra hafa toy ny fihavanan'ny tsiry sasany sy ny ravina maintso miaraka amin'ny hafa. voankazo sy legioma hanombohana ny sakafo. Amin'ity tranga ity, ny lisitry ny akora dia mety tsy ho tsotra kokoa: tsimoka, karaoty, voatabia, chives ary voaloboka.
Valo valo minitra monja no haharitra amboary ny karaoty amin'ny microwave. Minitra afaka araraotinao, toy ny nataoko, hanomanana ny ambiny amin'ireo akora sy ny fitafiana. Safidio ilay tianao indrindra; Vao nanisy sira sy dipoavatra ary menaka oliva fanampiny aho. Sahy manomana azy ve ianao?
Ireo tsimoka karaoty vita amin'ny microwaveda ireo dia tonga lafatra ho toy ny starter, hazavana ary mamelombelona hiadiana amin'ny andro mafana indrindra.
Fotoana hiketrehana: 10 M
Fotoana manontolo: 15 M
Karaoty lehibe 2
Dibera 1 knov
Nopotsehinay ny karaoty ary notapahinay tamin'ny antsasany, na ny halavany na ny sakany. taty aoriana zarainay roa ny hazo tsirairay lava ny halavany ka tsy dia nahandro firy intsony izy ireo.
Apetrantsika ao anaty lovia na tupper lalina izy ireo ary manampy rano izahay ka manarona ny fototr'ilay takelaka na tupper iray manontolo. Raha ny amiko, rano iray rantsana. Aorian'izay dia manaova ny karaoty izahay ary manarona fonosana plastika ao anaty fitoeran-drano mba hitondra azy ireo any amin'ny microwave.
Mahandro amin'ny heriny lehibe indrindra izahay mandritra ny 5-6 minitra na mandra-pahalefaka ny karaoty.
Raha manararaotra isika sokafy roa ny tsimoka, totozy ny voatabia ary tetehio ny sibolety. Afangaroinay ireto roa farany ireto ary apetraka amin'ny tsiry na amin'ny toerana tianao ny fangaro.
Raha vantany vao malemy ireo tapa-kazo, dia esorinay izy ireo, apetraho eo ambonin'izy ireo ny dibera ary andrahoy mandritra ny iray minitra miaraka amin'ny fiasan'ny grill.
Manampy ny salady izahay samy kibay sy voaloboka maina.
Mba hamitana ny sira sy dipoavatra ary rano misy menaka oliva ny tsimoka miaraka amin'ny karaoty ao anaty microwave.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » Starters mangatsiaka » Tsiry karaoty vita amin'ny mikrô
Zucchini feno voaroy miaraka amin'ny fromazy